Reputology: Rafitra fanairana ho an'ny hevitra an-tserasera | Martech Zone
Reputology: Rafitra fanairana ho an'ny hevitra an-tserasera
Alakamisy Oktobra Oktobra 10, 2013 Alakamisy Oktobra Oktobra 10, 2013 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izahay no nizara ny hevitray an-tserasera sy ny hafa misy fiantraikany amin'ny indostrian'ny trano fisakafoanana ny teknolojia. Ny Internet is ny fitaovana goto hanamarinana ireo orinasam-panompoana, trano fisakafoanana ary mpivarotra hafa. Reputology dia sehatra fanaraha-maso sy fanaovana tatitra. Mandefa fampandrenesana mailaka isaky ny misy mandinika ny orinasanao ao amin'ny Yelp, Google+ Local, Tripadvisor ary tranokala famerenana hafa. Amin'ny famaliana haingana, ny mpanjifanay dia afaka mahazo mpandinika tsy faly hanova ny sain'izy ireo 70% amin'ny fotoana.
Fanairana mailaka Reputology
Avy amin'ny fijerin'ny Operations, Reputology dia manamora ny fahitana ireo olana miverimberina amin'ny alàlan'ny fanangonana sy famakafakana ireo angon-drakitrao. Mandefa tatitra famintinana mandeha ho azy isan-kerinandro / isam-bolana izy io, ary manome anao Analytics hanaraka ny zava-bita nataonao.
Valio haingana - Makà fanairana mailaka mora tohina amin'ny fotoana. Ny rohy iray ao amin'ny mailaka dia mampiseho anao ny toerana nisehoan'ny hevitra voalohany.
Araho ny toerana maro - Fampandrenesana ny zotra amin'ny olona marina ary ampiasao ny tatitra famintinana hahitanao ireo olana misy fiatraikany amin'ny orinasa iray manontolo.
Araho ny zava-bitanao - Ny Analytics dia manamora ny fahazoana ny fomban'ny metric key sy ny fampitahana ny toerana.
Companies like Lisitr'i Angie (ny mpanjifanay) dia misy fampandrenesana ary fanelanelanana mihitsy aza hanampiana ireo orinasan-tseranana hampandrenesina sy ho tafarina amin'ny olan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa… fa ny tranokala misokatra hafa toa manjaka amin'ny famerenana sandoka (Vakio: Orinasa SEO 19 vao haingana no nandoa onitra tany New York).
Ny fisoratana anarana ho fanairana fanairana dia dingana voalohany hanarahan'ny orinasanao ny valiny amin'ny fitarainana… sandoka na tena izy!
Tags: Google+ LocalFanamarihana an-tseraseralazafanairana famerenanahamakafaka ny fanadihadianahevitraTripAdvisorYelp
Ny fiantraikan'ny teknolojia eo amin'ny sakafontsika
Maninona ny Google Hiding Keywords dia tsara ho an'ny mpivarotra